Zimbabwe news from Africa
Latest Zimbabwe News more»
Zimbabwe summoned the US ambassador in Harare Monday after US National Security Adviser Robert O'Brien referred to the nation as a foreign adversary and suggested it was taking advantage of protests over the killing of George Floyd to foment unrest.
BLANTYRE, Malawi — Manhunts have begun after hundreds of people, some with the coronavirus, fled quarantine centers in Zimbabwe and Malawi while authorities worry they will spread COVID-19 in countries whose health systems can be rapidly overwhelmed. In Malawi, more than 400 people recently repatriated from South Africa and elsewhere fled a center at a...
Manhunts are underway in Malawi and Zimbabwe Thursday after hundreds of people -- including dozens infected with the coronavirus – busted out of quarantine centers.
Zimbabwe's coronavirus cases double in a day to 132: government
The number of coronavirus cases in Zimbabwe has more than doubled to 132 over the past 24 hours, a government spokesman said on Wednesday.
See how people are making ventilators from scrap material
With the coronavirus spread across the world, citizens are finding innovative ways to help frontline workers. CNN's Arwa Damon follows people in Afghanistan, Zimbabwe and Syria who have found ways to build ventilators from recycled parts and with limited funding.